| ६:४२:२६ मा प्रकाशित
वि.सं. २०७७ साल फागुन ०६ गते । बिहीबार इ.स.२०२१ फेब्रुवरी १८ तारिक । शकसंवत् १९४२ । प्रमादी संवत्सर । उत्तरायण । शिशिर ऋतु । नेपाल संवत् ११४१ । माघ शुक्लपक्ष । तिथी– षष्ठी,०७ बजेर ०५ मिनेट उप्रान्त सप्तमी । नक्षत्र–भरुणी,२५ बजेर ४४ मिनेट उप्रान्त कृतिका । योग–ब्रम्ह,२६ बजेर ४६ मिनेट उप्रान्त ऐन्द्र । करण–तैतिल,०७ बजेर ०५ मिनेट उप्रान्त गर,२० बजेर १० मिनेट उप्रान्त वणिज । आनन्दादिमा–पद्य योग । चन्द्रराशि–मेष । काठमाडौंमा सूर्योदय बिहान ०६ बजेर ४० मिनेटमा,सूर्यास्त १७ बजेर ५६ मिनेटमा । दिनमान २८ घडी ०८ पला ।
मेष (चू,चे,चो,ला,लि,लू,ले,लो,अ):- व्यापार व्यवसायमा प्रसस्त नाफा कमाउन सकिनेछ भने लगानी गर्ने वातावरण बनाउन सकिने छ । तपाईको लुवाईख्वाई देखेर सबैजना मोहित हुनेछन् । मायाप्रेममा आफ्नो मान्छेलाई आफ्नै वरिपरी देख्न पाउदा मन प्रशन्न हुनेछ । राजनीति तथा समाजसेवामा समय लगानी गर्नेहरुले सर्वसाधारणको सहयोग तथा समर्थन पाउने हुँदा मन प्रशन्न हुनेछ । सामाजिक सञ्जाल तथा प्रविधिको प्रयोग मार्फत आफ्ना विचारहरु जनमानसमा लैजान सकिनेछ ।
बृष (ई,ऊ,ए,ओ,वा,वी,वू,वे,वो):- खर्च बढ्ने तथा कामहरु नहुने प्रशस्त सम्भावना रहेकोछ । आर्थिक स्थिती खस्केर जाने हुनाले घरायसी खर्च व्यवस्थापन गर्न हम्मे हम्मे पर्नेछ । पढाईलेखाईमा समय दिन नसक्दा पछि परिनेछ । स्वास्थ्यमा समस्या आई औषधी उपचार खर्च हुने योग रहेको छ । व्यवसायबाट आम्दानी गर्न लगानी बढाउनु पर्ला । तरपनि छोटो दुरिको यात्रा हुने तथा विदेशी सामानको व्यापार व्यवसाय फस्टाएर जानेछ ।
मिथुन ( का,की,कू,घ,ङ,छ,के,को,हा) :- आर्थिक दृष्टिले दिन उत्तम रहेकोछ भने अधुरा योजनाहरु पुरा हुनेछन् । व्यापार तथा पशुपालन व्यवसायबाट राम्रै लाभ हुनेछ । सन्तान सुख मिल्नेछ भने परिवारमा मांगलिक कार्य हुनेछ । पूख्र्यौली सम्पतिको प्रयोग मार्फत मनग्गे धन तथा सम्पती जोड्न सकिनेछ । पढाईलेखाई उत्कृष्ट नतिजा हात लाग्ने हुँदा मन प्रशन्न हुनेछ । मायाप्रेमको डोरो कसिलो भएर जानेछ ।
कर्कट ( ही,हू,हे,हो,डा,डी,डु,डे,डो):- कर्मक्षेत्रमा राम्रो काम गरी नाम कमाउन सकिने छ । बन्द व्यापार फस्टाएर जानेछ भने आर्थिक अवस्था मजभुत हुनेछ । राजनीति तथा समाजसेवामा जनताको काम गर्न सक्दा ईज्जत तथा प्रतिष्ठामा बृद्धि भएर जानेछ । रोजगार पाईने समय रहेको छ भने गरिरहेको काममा बढोत्तरिको प्रशस्त सम्भावना रहेको छ । तपाईको शालिन स्वाभावदेखि सबै मोहित हुनेछन् । प्रेममा खुलेर रमाउने समय रहेको छ ।
सिंह (मा,मी,मू,मे,मो,टा,टी,टू,टे):- सामाजिक काम गरी समाजमा नाम तथा दाम दुवै कमाउन सकिने छ । पढाईलेखाईमा सुधार भएर जाने तथा आफन्तहरुलाई खुशि पार्न सकिने छ । आफ्नो रितिरिवाज जोगाउने काममा समय खर्च हुनेछ भने तिर्थ यात्राको प्रसस्त सम्भावना रहेकोछ । व्यापार व्यवसायमा लगानी बढाई प्रसस्त नाफा कमाउने समय रहेको छ । प्रेम प्रसङगमा रमाउन चाहनेहरुका लागी दिन उत्तम रहेकोछ ।
कन्या ( टो,पा,पी,पू,ष,ण,ठ,पे,पो ) :- पढाईलेखाईमा उपलब्धी हात पार्नको लागी कडा मेहनेतको खाचो पर्नेछ । व्पायार व्यवसायमा समय दिन नसक्दा आम्दानीमा घटोत्तरी हुनेछ । आफन्त तथा दिदिबहिनीसँग सामान्य कुरामा पनि मनमुटाब बढ्ने योग रहेको छ । स्थाई सम्पती तथा सवारीसाधनको प्रयोग गर्दा ध्यान दिनुहोला समय मध्यम रहेको छ । प्रेममा नचाहादै नचाहादै टाडिनु पर्दा मन खिन्न हुनेछ ।
तुला ( रा,री,रु,रे,रो,ता,ती,तू,ते ) :- सुखदुःखमा साथ दिनेहरू प्रशस्तै भेटिनेछन् भने परिवारजनको साथले नयाँ आशा पलाउनेछ। प्रेम र मित्रताको बन्धन कसिनुका साथै दाम्पत्य सुखमा रमाउने समय छ। विभिन्न सहयोग र उपहार पाइने छ। आयआर्जन पनि राम्रै हुनेछ। अतिथिका रूपमा सम्मान प्राप्त हुन सक्छ। रमाइलो यात्रा गर्ने अवसर जुट्नेछ। कामबाट पनि फुर्सद पाइनेछ। व्यापारकै शिलशिलामा यात्रा हुने योग रहेको छ ।
बृश्चिक ( तो,ना,नी,नू,ने,नो,या,यी,यू ) :- व्यवसायमा प्रशस्त आम्दानी हुने तथा पुराना कारोबारहरुलाई सल्टाउने समय रहेको छ । शत्रुले दुख दिन खोजे पनि अन्तत उनिहरुलाई परास्त गर्दै अगाडी बढ्न सकिने छ । आफन्त तथा मावली पक्षबाट सहयोगको अपेक्षा गर्न सकिनेछ । विवाद तथा न्यायिक निर्णयहरुबाट हुने सुनुवाई तपाईकै पक्षमा हुने हुनाले मन प्रशन्न हुनेछ । पढाईलेखाईमा प्रतिद्धन्द्धिहरुलाई किनारा लगाउदै नतिजा आफ्नो पोल्टोमा पार्न सकिनेछ ।
धनु ( ये,यो,भा,भी,भू,ध,फा,ढा,भे ): – अध्ययनमा मन जानेछ भने शिक्षा क्षेत्रमा गरिएको लगानि फस्टाएर जानेछ । स्कुल,कलेज बैक तथा बित्तिय क्षेत्रबाट भनेजस्तो आम्दानी हुनेछ । आफुले मन पराएको मानिसबाट उपाहार तथा बिलाशी बस्तु प्राप्त हुनेछ । व्यापार प्रशस्त आम्दानी हुनेछ भने नोकरीमा बढवा हुने योग रहेको छ । बंश बृद्धिको योगलाई नकार्न सकिदैन ।
मकर ( भो,जा,जी,जू,जे,जो,ख,खी,खू,खे,खो,गा,गी) :- कृषि तथा पशुपालनमा गरिएको लगानीबाट मनग्गे आम्दानी हुनेछ । काम तथा अध्ययनको सवालमा आमा तथा आफन्तबाट छुट्टिएर यात्राको तय गर्नुपर्दा मन खिन्न हुनेछ । घर जग्गा तथा सवारीसाधनको खरिद बिक्रिबाट भनेजस्तो नाफा कमाउन सकिने छ । मायाप्रेममा आजको दिन टाडै रहनु नै बेश हुनेछ नजिकिदा मनमुटाव हुनेछ । अरुकै काममा समय खर्चिदा आफ्नो काम थाती रहने छ ।
कुम्भ (गू,गे,गो,सा,सी,सू,से,सो,दा ):- नयाँ काम गरी मनग्गे धन आर्जन गर्न सकिनेछ । साथिभाईको सहयोगले राम्रै सहयोग जुटाउन सकिने छ । विशेषगरी नयाँ उद्योग वा रचनात्मक काममा जुट्ने समय छ। परिश्रमअनुसार उपलब्धि पनि राम्रै पाइएला। रोकिएका काम पुनः सुरु हुन सक्छन्। विवाद तथा प्रतिस्पर्धामा तपाईको नाम अग्र स्थानमा आउने छ । परिवारजनका आकांक्षा तथा ईच्छाहरु पुरा गर्न सकिने छ ।
मीन (दी,दू,थ,झ,ञ,दे,दो,चा,ची):- व्यवसाय फस्टाएर जानेछ भने बौद्धिकताको प्रयोग गरी धन तथा सम्पती संग्रह गर्न सकिनेछ । आफन्त तथा कुटुम्बसँग मिलेर गरिने व्यापार फस्टाएर जानेछ । पारिवारिक वातावरणमा रमाउदै स्वादिष्ट भोजन ग्रहण गर्ने अवसर जुर्नेछ । सामाजिक तथा कल्याणकारी काम गरी समाजमा नाम कमाउन सकिने छ । थोरै बोलेर वा बोलीकै माध्यम बाट धेरै कामहरु गर्न सकिने छ । धातु तथा खनिज पदार्थसँग सम्बन्धीत व्यवसायबाट लाभ लिन सकिनेछ । तपाईको दिन शुभ रहोस् ।
तपाईको २०७८ सालको बार्षिक राशीफल कस्ताे छ ? २ दिन पहिले
तपाईकाे साप्ताहिक राशीफल [ चैत्र २९ गते आइतबारदेखी बैशाख ०४ गते शनिबारसम्मको ] ४ दिन पहिले
ओली र ठाकुरबीच भेटवार्ता ४२ मिनेट पहिले
ओली सरकारको बहिर्गमन र लोकतन्त्रको संरक्षण ५४ मिनेट पहिले
डिजिटाइज अभियानमा जुटेको निगमले ल्यायो इआरपी ४ घण्टा पहिले
चितवनमा पशु ढुवानी गर्ने ३६ सवारीसाधन कारवाहीमा १० घण्टा पहिले
कोरोना जोखिमका कारण विक्रमबाबा मेला स्थगन ४ घण्टा पहिले
सिरहामा सुनचाँदी व्यवसायीको गोली हानी हत्या ४ दिन पहिले
चार मन्त्रीको पुनर्नियुक्ति, साँझ ५ बजे शपथ ६ दिन पहिले
विन्ध्यबासिनी म्युजिक अवार्ड यसवर्ष क-कसले पाए ? ४ दिन पहिले
खरबुजा तपाईको मुटु स्वास्थ्यका लागि शानदार ४ दिन पहिले
मजदूरको पारिश्रमिक राेकिदा नारायणगढ–बुटवल सडक निर्माण ठप्प ३ हप्ता पहिले
नेशनल हाईड्रोपावरले साधारण सभाका लागि भोलिदेखि बुक क्लोज गर्ने ३ हप्ता पहिले
नारायणगढ–बुटवल सडक तोकिएका अवधिमा सम्पन्न गर्न जोड ३ हप्ता पहिले
ब्राजिलमा एकैदिन कोरोनाबाट ४२ सयको मृत्यु ६ दिन पहिले
प्रधानमन्त्री ओलीको गृह जिल्लामै सत्ता निकट पत्रकार पराजीत ७ दिन पहिले
नौ वर्षमुनिका बालबालिकामा कोरोना सङ्क्रमण बढ्दै ९ महिना पहिले
अब सार्वजनिक यातायातमा मास्क नलगाउने यात्रुलाई कारबाही ३ हप्ता पहिले
नेकपामा नेता कार्यकर्ताको घुलनशिल प्रक्रिया, ७७ जिल्लाको इन्चार्जमा को–को फालिए ! २ वर्ष पहिले